Enjoy Your Life! - Spiceworks Myanmar
Spiceworks Myanmar မှာ Web Designer အဖြစ် တာဝန်ယူလုပ်ကိုင်နေတဲ့ ဆုရည်ထွန်းပါ။
ဒီတစ်ခေါက်ရွေးချယ်ထားတာကတော့ ဘဝကို ဘယ်လိုပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းသွားမလဲ ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးသွားချင်ပါတယ်။ လူတိုင်းကတော့ နေ့ရက်တိုင်းကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့ဆိုတာ အပြောလွယ်ပြီး အလုပ်ခက်တဲ့ အရာတစ်ခုဆိုတာ အားလုံး လက်ခံလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း တိုတောင်းလှတဲ့ လူ့ဘဝကို အခက်အခဲတွေကြားထဲကနေ အတတ်နိုင်ဆုံး ပျော်ရွှင်အောင် ဘယ်လိုနေထိုင်သွားရမလဲဆိုတာ လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။
တချို့လူတွေက ဘဝကိုပျော်မွေ့ဖို့ ဒီလိုအရာတွေကို လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။
・ပြီးပြည့်စုံသော ဆက်ဆံရေး သို့မဟုတ် သူငယ်ချင်းများ ရှိပါစေ။
・လေးစားဖွယ် သို့မဟုတ် ကျော်ကြားသူဖြစ်ပါစေ။
သို့သော် လူများစွာသည် အထက်ပါအရာများကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရင်တောင်မှ မပျော်ရွှင်နိုင်ကြသေးပါဘူး။
How To Achieve A Healthy & Happy Lifestyle?
ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ လူတိုင်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မတူနိုင်ကြပါဘူး။
‘သတိပဋ္ဌာန်တရား၏ဖခင်’ ဗီယက်နမ်ဘုန်းကြီး Thích Nhất Hạnh က
“ပျော်ရွှင်မှုအခြေအနေတွေ အများကြီးရနိုင်ပါပြီ- အခုအချိန်မှာ မင်းပျော်ရွှင်ဖို့ လုံလောက်တာထက် ပိုပါတယ်”
ဒါပေမယ့် ဘဝမှာ ပျော်ရွှင်စရာတွေ အများကြီးရှိနေပြီ ဆိုရင် နေ့တိုင်း ဘာလို့ မပျော်နေရတာလဲ?
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဘဝကို ပျော်ရွှင်အောင် သင်ယူခြင်းသည် အလေ့အကျင့် လိုအပ်သောကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
လက်တွေ့ဘဝတွင် ကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ ဘဝလူနေမှုဘဝပုံစံကို ဖန်တီးခြင်းသည် အပြုသဘောဆောင်သောစိတ်ထား၊ ကြံ့ခိုင်သောစိတ်ကျန်းမာရေးနှင့် ကျန်းမာသောကိုယ်ပိုင်ပုံသဏ္ဌာန်ကို ထိန်းထားနိုင်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဘဝကို နေ့ရက်တိုင်း အပြည့်အဝပျော်ရွှင်အောင် သင်ယူခြင်းထက် လေ့ကျင့်ခြင်းက ပိုကောင်းသော ကျွမ်းကျင်မှု မဖြစ်နိုင်ပေဘူးလား။
(1)ကျန်းမာတဲ့နေထိုင်မှုပုံစံရရှိရန် အချက်( ၉ )ချက်
ကျန်းမာခြင်းသည် လာဘ်ကြီးတစ်ပါး ဆိုသည့်အတိုင်း ဘဝမှာ အပြည့်အဝပျော်ရွှင်ဖို့ ကျန်းမာရေးကောင်းဖို့က မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ကျန်းမာတဲ့ ဘဝနေထိုင်မှုရရှိနိုင်မယ့် အချက်လေးတွေကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
ညီမအပါအဝင် လူအများစုက နေ့စဉ် ရေအလုံအလောက် သောက်ဖို့မေ့နေတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ညီမတို့ ကိုယ်ခန္ဓာကတော့ ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ရန် အရေးကြီးပါတယ်။
ရေသည် ညီမတို့၏ ကိုယ်ခန္ဓာလုပ်ငန်းဆောင်တာများကို လုပ်ဆောင်ရန်၊ အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားရန်နှင့် ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ အာဟာရဓာတ်နှင့် အောက်ဆီဂျင်ကို ပို့ဆောင်ရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။
ဆီးသွားခြင်း၊ ဝမ်းသွားခြင်း၊ ချွေးထွက်ခြင်း နှင့် အသက်ရှုခြင်းတို့ဖြင့် နေ့စဉ်ရေကို စွန့်ထုတ်သောကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ ရေပမာဏကို အဆက်မပြတ် ဖြည့်တင်းရန် လိုအပ်ပါတယ်။ ညီမတို့လိုအပ်သောရေပမာဏသည် အချက်အမျိုးမျိုးပေါ်တွင် မူတည်သော်လည်း ယေဘုယျအားဖြင့် အရွယ်ရောက်ပြီးသူတစ်ဦးသည် တစ်နေ့လျှင် နှစ်လီတာမှ သုံးလီတာအထိ လိုအပ်ပါတယ်။
ရေအလုံအလောက်ရနေလားဆိုတာ ပြောပြဖို့ နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုကတော့ အရောင်မဲ့ သို့မဟုတ် အဝါဖျော့ဖြစ်နေသောဆီးအရောင်ကို ကြည့်ပြီးသုံးသပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အိပ်စက်ခြင်းသည် ခန္ဓာကိုယ်နှင့် စိတ်အား ပြန်လည်အားဖြည့်ပေးသည့် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး နိုးလာသောအခါတွင် လန်းဆန်းမှုနှင့် နိုးကြားမှုတို့ကို ပေးစွမ်းပါတယ်။ ကျန်းမာစွာ အိပ်စက်ခြင်းက ခန္ဓာကိုယ်ကို ကျန်းမာစေပြီး ရောဂါတွေ ကင်းဝေးစေပါတယ်။ လုံလောက်တဲ့ အိပ်စက်ချိန်မရှိရင် ဦးနှောက်က ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
တစ်ပတ်မှာ အကြိမ်အနည်းငယ်မကဘဲ နေ့တိုင်း တစ်နေ့လျှင် မိမိခန္ဓာကိုယ်ကို မိနစ်(30)ခန့် တစ်နည်းနည်းဖြင့် ရွေ့လျားခြင်းဖြင့် ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကို လျော့ကျစေကာ အရိုးသိပ်သည်းဆကို မြင့်မားလာစေပြီး ဘဝသက်တမ်းကို တိုးလာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
1.4 သစ်သီးနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို များများစားပါ။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် သစ်သီးဝလံများ ကြွယ်ဝသော အစားအစာများသည် သွေးဖိအားကို လျှော့ချပေးနိုင်ပြီး နှလုံးရောဂါနှင့် လေဖြတ်နိုင်ခြေကို လျှော့ချနိုင်ကာ အချို့သော ကင်ဆာအမျိုးအစားများကို ကာကွယ်နိုင်ကာ မျက်စိနှင့် အစာခြေလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများ ဖြစ်နိုင်ခြေကို လျှော့ချပေးပြီး သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကို ကောင်းမွန်စေကာ အစာစားချင်စိတ်ကို ထိန်းထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
သစ်သီးဝလံနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များအားလုံးသည် သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ဗီတာမင်နှင့် သတ္တုဓာတ်များ ပါဝင်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကို ထိန်းသိမ်းရန် တစ်နေ့လျှင် သစ်သီးနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်(၅) ကြိမ် စားသုံးရန် အကြံပြုထားပါတယ်။
မိမိအိမ်အနီးအနားရှိ ဈေး သို့မဟုတ် super market မှာ သဘာဝအလျောက် တောက်ပတဲ့အရောင်ရှိတဲ့ အစားအစာတွေကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူပါ။
၎င်းတို့သည် antioxidants မြင့်မားစွာပါဝင်ပါတယ်။ ရှာဖွေကြည့်ရှုရန် အောက်ပါနမူနာအချို့ကို ပြောပြပေးထားပါတယ်။
• အဖြူရောင် (ငှက်ပျောသီး၊ မှို)၊
• အဝါရောင် (နာနတ်သီး၊ သရက်သီး)၊
• လိမ္မော်ရောင် (လိမ္မော်သီး၊ သင်္ဘောသီး)
• အနီရောင် (ပန်းသီး၊ စတော်ဘယ်ရီ၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ဖရဲသီး)
• အစိမ်းရောင် (မာလကာ၊ ထောပတ်သီး၊ သခွားသီး၊ ဆလတ်)
• ခရမ်းရောင်/အပြာ (Blackberry၊ ခရမ်းသီး၊ Prunes)
1.6 ကိုယ်တိုင် အစားအသောက်ပြင်ဆင်ပါ။
မိမိကိုယ်တိုင် အစားအသောက်ပြင်ဆင်တဲ့အခါ မိမိခန္ဓာကိုယ်အတွက် မှန်ကန်တဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ ရွေးချယ်မှုတွေကို ပြုလုပ်ဖို့ ပိုမိုလွယ်ကူစေပါတယ်။
ဝမ်းဗိုက် မဟုတ်သော ဦးနှောက်သည် ဆာလောင်မှုနှင့် ပြည့်ဝသောခံစားချက်များအတွက် တာဝန်ရှိသော အင်္ဂါဖြစ်ပါတယ်။ အစာစားချိန်အတွင်း အချိန်ကိုယူ၍ ဖြည်းဖြည်းစားပါက ဦးနှောက်မှ ဗိုက်ဆီသို့ “အပြည့်” မက်ဆေ့ခ်ျပေးပို့ရန် လုံလောက်သောအချိန်ကို ခွင့်ပြုပေးပြီး အစားအစာကို အပြည့်အဝ စားသုံးနိုင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးလိပ်သောက်တာ မကောင်းဘူး။ ဒါလူတိုင်းနေရာပေါင်းစုံကနေ ကျန်းမာရေးဗဟုသုတအနေနဲ့ sharing လုပ်ထားပြီးသားဖြစ်လို့ အထူးပြောပြနေဖို့တော့ မလိုဘူးထင်ပါတယ်။
ဆေးလိပ်သောက်သူဖြစ်ပါက မိမိကျန်းမာရေးအတွက်သာမက မိသားစုနှင့် သူငယ်ချင်းများအတွက်ပါ ကျန်းမာရေးထိခိုက်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သောကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးလိပ်ဖြတ်ပါ။
1.9 ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော သရေစာတွေကို လက်ထဲမှာ ဆောင်ထားပါ။
တစ်နေ့တာလုံး သေးငယ်သော အစာစားခြင်းသည် သင့်ဇီဝရုပ်ဖြစ်ပျက်မှုအတွက် ကောင်းမွန်သော်လည်း မှန်ကန်တဲ့ အရာကို ရွေးချယ်စားသုံးခြင်းဖြစ်ဖို့တော့ အရေးကြီးပါတယ်။
တစ်နေ့တာအတွင်း အဆာပြေစားတဲ့အခါ အာရုံစူးစိုက်မှုမရှိတဲ့ သစ်သီးတွေ၊ အသုပ်တွေ၊ ဒါမှမဟုတ် လတ်ဆတ်တဲ့ Juiceရည်တွေလိုမျိုး အရာတွေကို ရှာဖွေပါ။ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော သရေစာများသည် အာဟာရဖြစ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ သကြားဓာတ်ပမာဏကို ထိန်းညှိပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
(2)စိတ်ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်သော နေထိုင်မှုပုံစံ ရရှိရန် အချက်( ၉ )ချက်
2.1 မိမိကိုယ်မိမိ ကြင်နာပါ။
လူတွေဟာ အမှားလုပ်မိရင် အရာရာကို သတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုအခိုက်အတန့်တွေမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကြင်နာပါ။ ဘာပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ ဖြစ်ခဲ့ပြီ။ အတိတ်ကို သင်ခန်းစာယူရုံကလွဲလို့ ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ပါဘူး။ ဒါကအစပိုင်းမှာ မယုံနိုင်လောက်အောင် ခက်ခဲနိုင်ပေမယ့် လေ့ကျင့်မှုနဲ့အတူ ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကို ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်နိုင်ဖို့ များစွာအထောက်အကူပြုပေးပါလိမ့်မယ်။
မိမိကိုယ်ကိုယ်လေးလေးနက်နက်ကြည့်လိုက်ပါ၊ ကိုယ်ဘယ်သူလဲဆိုတာ၊ ကိုယ်ဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်၊ ဘယ်နေရာကိုသွားနေပါစေ ကိုယ်က ပျော်ရွှင်ဖို့ထိုက်တန်တယ်ဆိုတာ တွေ့ရှိပါလိမ့်မယ်။ အသက်ရှင်နေတာကြောင့် ပျော်ရွှင်ဖို့ထိုက်တန်ပါတယ်။ ဒီအခိုက်အတန့်လေးမှာ ပျော်ရွှင်အေးချမ်းစွာ နေနိုင်ပါစေ။
ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ထဲမှာ အရာရာက ညစ်နွမ်းနေပုံရပြီး တုန်လှုပ်ချောက်ချားစရာတွေကနေ မရုန်းထွက်နိုင်ဘူးဆိုရင် ချောကလက်ဘားကို ကိုင်လိုက်ပါ။ စားတဲ့ ချောကလက်က ပိုမည်းလေ ပိုကောင်းလေပါပဲ။ ချောကလက်သည် သဘာဝအတိုင်း စိတ်ခံစားချက်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ကြောင်း သိပ္ပံပညာရှင်များက ပြောပြပေးထားပါတယ်။
2.3 ချစ်ရသူကို စဉ်းစားပါ။
စိတ်ဓာတ်တွေကျလာတဲ့အခါ အထီးကျန်နေလို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်နေ့တာရဲ့ ဖိစီးမှုက သင့်ကို အထီးကျန်စေပြီး ဗလာဖြစ်နေစေပါတယ်။ မင်းကို အချစ်ဆုံးသူအကြောင်း တွေးပြီး အဲဒီလူက မင်းမျက်နှာကို ပြုံးပြတဲ့ အချိန်တွေကို သတိရပါ။ အမှတ်တရတွေက တဆင့် အဲ့ဒီအချိန်ရဲ့ နွေးထွေးတဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကို ပြန်လည်ရရှိလာနိုင်ပါတယ်။
2.4 ၄၅ စက္ကန့် တရားထိုင်ပါ။
အလွန်အမင်း အာရုံပျံ့လွင့်ခြင်းနှင့်အတူ စိတ်ညစ်စရာတွေထဲမှာ နစ်မြုပ်နေခြင်းက စိတ်စွမ်းအင်ကို ကျဆင်းစေပြီး စိတ်ဓာတ်ကျစေနိုင်ပါတယ်။ မိမိဖုန်းတွင် timer ကို 45 စက္ကန့်ထားပါ။ နောက်ပြန်ဆုတ်၊ မျက်လုံးကိုမှိတ်ထား၊ ပုခုံးတွေကို လွှတ်ချလိုက်ပြီး အသက်ပြင်းပြင်းရှူဖို့ အာရုံစိုက်ပါ။ ရှူထုတ်ရင်းနဲ့ နှာခေါင်းပေါက်တွေကနေ ခန္ဓာကိုယ်ကို ထွက်သွားတဲ့ အဆိုးမြင်အတွေးတွေကို ပုံဖော်ပါ။ နှိုးစက်မြည်လာသောအခါ သင့်မျက်လုံးများကို ဖွင့်ပါ။ အာရုံစိုက်ပြီး ကြည်နူးမှုကို ခံစားရန် 10 စက္ကန့်အချိန်ယူပါ။
2.5 ကျေးဇူးတင်သောစာရင်းတိုကို ပြုလုပ်ပါ။
တခြားလူများက ကိုယ့်အပေါ် အလေးထားဆက်ဆံမှု မရတော့ဘူးလို့ခံစားရရင်လည်း ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်နိုင်စွမ်းကို လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ရရှိလာတဲ့ အလေးထားဆက်ဆံမှုဆိုတာ ကိုယ်က တခြားသူကိုပေးလိုက်တဲ့ အလေးမြတ်ထားမှုနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။
ကိုယ့်ဘဝအတွက် ဘယ်သူတွေက အကျိုးပြုကြောင်းနှင့် ကိုယ့်အပေါ် ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ဆက်ဆံနေတဲ့လူတွေလည်း ဆိုတာ သိရှိနားလည်ရန် အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်။ အနီးစပ်ဆုံးအနေနဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကနေ ခုချိန်အထိ ကိုယ့်အတွက် ကောင်းမွန်သောအရာတစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့သူ အနည်းဆုံးငါးဦးကို စာရင်းပြုစုပါ။ သူတို့ကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း မှတ်စုပေးပို့ရန် သို့မဟုတ် နေ့မကူးခင် ဖုန်းခေါ်ဆိုရန် ပြုလုပ်ပါ။
2.6 Celebrate Small Wins
ယနေ့ခေတ်တွင် ဆိုရှယ်မီဒီယာသည် ဘဝ အတွေ့အကြုံတစ်ခု သို့မဟုတ် အောင်မြင်မှုတစ်ခုမှ အခြားတစ်ခုသို့ ခုန်တက်သွားခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ရန် လှည့်စားနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် ဘဝသည် အောင်မြင်မှုများ သို့မဟုတ် အတွေ့အကြုံများဖြင့် ဖန်တီးထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ ၎င်းတို့ကြားရှိ အခိုက်အတန့်များကို ဖန်တီးထားခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။
သမိုင်းမှတ်တိုင်များကို မဆင်နွှဲပါနှင့်။ ၎င်းတို့သည် မိုင်တိုင်တွေမှာ တစ်ကြိမ်သာဖြစ်ပါတယ်။
ယင်းအစား ခြေလှမ်းတိုင်းကို ဂုဏ်ပြုခြင်းဖြင့် ဘဝကို ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပုံကို လေ့လာပါ။
ဥပမာအားဖြင့် စာမေးပွဲရလဒ်များနှင့် လုပ်ငန်းအမြတ်အစွန်းများကို ခံစားရုံမျှမကပါ – လေ့လာချိန်နာရီတိုင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးလိုက်သည့် အရာတစ်ခုချင်းစီတိုင်းကို အောင်မြင်မှုအနေနဲ့ ခံစားပြီး ပျော်ရွှင်လိုက်ပါ။
2.7 သင့်ကိုယ်သင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။
မိမိကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းသည် မိမိကိုယ်ကို ချစ်ခြင်း၏ လုပ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့ သုခကို ဦးစားပေးပါတယ်။ မိမိကိုယ်ကို စာနာမှု၊ လက်ခံမှုနှင့် ပျော်ရွှင်မှုတို့ကို ပေါက်ဖွားစေသည့် မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်ကိုလည်း ဖော်ဆောင်လျက်ရှိပါတယ်။
မိမိကိုယ်မိမိ တိုးတက်စေမည့် နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေကာ လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပျော်ရွှင်စွာ လုပ်ဆောင်ပါ။
ဥပမာအားဖြင့် အခမဲ့အွန်လိုင်းသင်တန်း၊ ဂျာနယ်၊ လေ့ကျင့်ခန်း၊ တရားထိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် မိမိကိုယ်ကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစာအုပ်ကို ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
2.8 အပြုသဘောဆောင်သောဆက်ဆံရေးကို ပြုစုပျိုးထောင်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ၀တွင် အပြုသဘောဆောင်သော ဆက်ဆံရေးရှိခြင်းသည် အမှန်တကယ် ပျော်ရွှင်ကျေနပ်မှုရရှိရန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ အမှန်တကယ်တော့ ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကြီးမားဆုံး လေ့လာမှုက “အခြားသူတွေနဲ့ အချိန်ဖြုန်းတာက နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ပိုပျော်ရွှင်စေတယ်” ဆိုတာကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ၊ မိသားစုတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ပါ။ အချင်းချင်း ကူညီရိုင်းပင်းဖို့လိုအပ်သလို သင်နှင့် သင့်ချစ်ရသူ၏ ဘာသာစကားများကို နားလည်ခြင်းသည် သင့်ဆက်ဆံရေးကို တိုးတက်စေရန် ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
2.9 အသစ်သောအရာများကို စမ်းကြည့်ပါ။
အသစ်သောအရာများကို စမ်းသုံးခြင်းနှင့် နေရာအသစ်များကို ရှာဖွေခြင်းသည် ကိုယ့်ရဲ့ အာရုံခံစားမှုများကို အားကောင်းစေပြီး အမြင်များကို ချဲ့ထွင်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်အမြဲလုပ်ချင်နေသောအရာ သို့မဟုတ် ကိုယ့်စိတ်ကူး အိပ်မက်တစ်ခုရှိပါသလား။ကိုယ်အမြဲသွားချင်တဲ့နေရာရှိပါသလား။ ကိုယ်သွားလိုသောနေရာများ၊ ကိုယ်လုပ်ဆောင်လိုသော လှုပ်ရှားမှုများနှင့် ကိုယ်လေ့လာလိုသည့် အရာများကို စာရင်းပြုစုရေးသားပါ။
ကိုယ်အမြဲတွေ့နေရသော်လည်း မရောက်ဖူးသော စားသောက်ဆိုင်မှ ဈေးဝယ်ထွက်ခြင်းကဲ့သို့သော ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သူဌေးဖြစ်လာခြင်းကဲ့သို့သော ကြီးကြီးမားမားအရာအချို့ကို ထည့်သွင်းပါ။ ထို့နောက် ပြက္ခဒိန်တွင် ဤအရာအချို့ကို အချိန်ဇယားဆွဲပါ။ အသေးဆုံးမှ စတင်ပြီး အကြီးဆုံးအထိ ကိုယ်လုပ်ချင်နေသောအရာများကို တစ်ခုချင်း လုပ်ဆောင်ပါ။
ဘဝရဲ့နေ့ရက်တိုင်းကို ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်အောင် သင်ယူခြင်းသည် အလေ့အကျင့်နှင့် ကြိုးစားအားထုတ်မှု လိုအပ်သော်လည်း ဆုလာဘ်များသည် အမြဲတမ်း ကြိုးစားရကျိုးနပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆုံးထိ ဖတ်ရှုပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်စရာနေ့ရက်များကို နေ့တိုင်းပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။
Previous Post:One Year Experience From Spiceworks Myanmar
Next Post:Let’s Manage Our Stress